Sida al-Shabaab uga faa’iido rabshadaha iyo qalalaaska
Weerarrada uu ururka nabad-diidka ah ee al-Shabaab la beegsado magaala madaxda Muqdisho lagsa billaabo xilligii ururkaas dilaaga ah laga saaray Muqdisho, waxay dhaliyeen dhimasho iyo dhaawac baahsan iyadoo inta badan dhibbaneyaasha qaraxyadaas ay yihiin shacabka masaakiinta ah.
Dhimashada iyo dhaawaca ka dhasha qaraxyada ka sokow, waxaa jira bur bur hantiyeed oo uu sababo weerar walba oo laga fuliyo magaalada Muqdisho. Weerarradan ayaa intooda badan lala beegsadaa xarumo ganacsi oo isugu jira hoteello, makhaayado iyo meelo kale, kuwaasoo ku burbura awoodda qaraxa ee weerarrada aan kala sooca laheyn. Mararka qaar wuxuu burbur kaas la mid ah sidoo kale gaaraa dhismeyaal ay leeyihiin dad rayid ah.
Dhanka kale waxay weerarradu saameyn xoog leh ku yeesheen dhaqdhaqaaqyadii dadweynaha iyo habsami u socodkii ganacsiga. Dad badan oo ganacsato ah ayaa guryahooda ku sugan, iyagoo walaac ka qaba inay waxyeello ka soo gaarto weerarrada sida micne darrada ururka al-Shabaab ula beegsado xarumaha ganacsiyadooda.
Ujeeddada ururka dilaaga ah ee al-Shabaab ayaa ah in haba yaraatee ummadda Soomaaliyeed aysan gaarin horumar, aysan helinna nabad waarta si noloshooda u horumarto. Ururku wuxuu ujeedaa oo keliya in dalkeenna ay ka socdaan dagaallo aan dabo dhammaad laheyn, wuxuuna faa’iido weyn ku haystaa in rabshado joogto ah ay ka jiraan dalka.
Xorriyo 2 Views : 247
Xorriyo 1 Views : 10407